आईजीपी प्रकरण के होला ? सक्कली र नक्कली छुट्याउदै प्रधानन्यायाधीश कार्की - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आईजीपी प्रकरण के होला ? सक्कली र नक्कली छुट्याउदै प्रधानन्यायाधीश कार्की
काठमाडौं । महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने वा अघि बढाउनेमा देखिएको अन्यौलसँगै आईजीपी नियुक्ति प्रकरण पनि अन्यौलमा परेको छ । जयबहादुर चन्दको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले पहिलो दिनमै अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो । भोलिपल्ट अर्को त्यस्तै आदेश दियो । फटाफट सुनुवाइ गरी चन्दको नियुक्ति नै बदर भयो ।
तर, प्रकाश अर्यालको नियुक्तिमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी भएन । त्यसमा कारण देखाऊ आदेश मात्र अदालतले दियो । अन्य सामान्य विवादमा औपचारिकताका लागि मात्र पनि यस्ता आदेश दिइन्छन् । अर्को उल्लेख्य पक्ष के छ भने अब यो विवाद प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायत अन्य चार जना न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले हेर्न सम्भव छैन । कार्की अदालत फर्के पनि उनले अब मुद्दा नहर्ने तर बेन्चमात्र तोक्ने मनस्थिति बनाइ सकेकी छन् ।
न्यायाधीश कार्की, खतिवडा, भट्टराई र सिन्हाले यसअघि यही विवादमा उनीहरूले फैसला गरिसकेका छन् । र, यसमा तत्कालै अर्को आदेश वा फैसला आउन पनि सम्भव छैन । अब बदलाको भाव नै प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यका साथ अदालत वा न्यायीक नेतृत्व प्रस्तुत हुनेछैन । बदलाको भाव राख्ने हो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा उनीलाई सजाय हुने आधार छ । तर, सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको फैसलासँग बाझिने विवरणसहितका कागजपत्र कसरी तयार भए ?
अहिले अदालतभित्र शसको विषय बनेको छ । फैसला नगरेपनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसमा चासो राखेकी छन् । सरकारी पक्षले अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेका कागजातमाथि नै प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । ‘सरकारले भनेको सक्कली वा अदालतले गरेको फैसला सक्कली ? प्रधानन्यायाधीले अब फैसला नै नगरेपनि जान्नेगरि चासो रोखेकी छन् । ’ एक अधिकारीले भने ।
3768 पटक पढिएको